လက်တွေ့လေ့လာ... Squid Proxy Server - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
လက်တွေ့လေ့လာ... Squid Proxy Server
22-02-2008, 04:05 PM
ပို့စ် 17 ခုအတွက် 68 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ Professional တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး....ဒါပေမဲ့...ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်လေးကို..အပြည့်အစုံ..နားလည်အောင်.ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်..
PROXY SERVER ကိုတော့ မိတ်ဆွေတို့ သိကောင်းသိကြမှာပါ.....ဥပမာ.....[ISA - (Internet Security and Acceleration Server) ] ပေါ့ဗျာ....အဲ့ဒိလိုမျိူးဘဲ....PROXY SERVAR တွေအများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ အခုလက်ရှိ STABLE ဖြစ်နေတဲ့ PROXY SERVAR လေးတစ်ခုနဲ့ ရင်းနှီးသိကျွမ်းပြီးသူ..မိတ်ဆွေယောင်းယင်းများကိုရော....
[ SQUID PROXY SERVER ] ဆိုတာလေးပါပဲ........သူကတော့ Linux OS ပေါ်မှာ Run
တဲ့ PROXY SERVAR တစ်မျိူးပါ.............ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာကတော့..........
Microsoft OS ပေါ်မှာ RUN လို့ရအောင် ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ Configuration ပြုလုပ်နည်းလေးနဲ့ပါဝင်အသုံးပြုရမယ့် Applications လေးတွေပါ.................နောက်
ပိုင်းမှာရှင်းလင်းချက်နဲ့အတူ Software များတင်ပေးပါ့မယ်.........ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းပေးပါ.................
ကျွန်တော်အလုပ်နဲနဲများသွားလို့ နောက်ကျသွားတာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ..............
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Squid Proxy Server နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှင်းပြသွားပါ့မယ်............
ှsoftware များကို upload လုပ်ဖို့ရာတော့ လောလောဆယ် အဆင်မပြေသေးလို့ပါ.....ဒါကြောင့် configure ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို အရင်ရှင်းပြပါရစေ.........................
ပါဝင်မည့် software applications တွေကတော့ ..........................................
၁။ Microsoft Visual C++ 6.0 SP6
၂။ Inno Setup Compiler (or) Python လိုမျိုး C Programming.
Language ပိုင်းမှာသုံးတဲ့ Third party Software မျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်.
(မှတ်ချက်။ ။ C programming language ကျွမ်းကျင်သူအဖို့တော့ မလိုအပ်
၃။ MSYS + MinGW (or) Cygwin
 ၄။ SQUID 2.6 STABLE 16 တို့ဖြစ်ပါတယ်â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..။
Squid ဆိုတာ Proxy Server တစ်မျိုးပါ။
Proxy Server ဆိုတာဘာလဲâ€¦?
Proxy Server ဆိုတာ မြန်မာလို လိုရင်းရှင်းပြရရင်တော့ Networking Security & Polics ပိုင်းမှာ [ Firewall ] အဖြစ် အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခု ကနေပြီးသရုပ်ဆောင်ရသလို â€¦â€¦â€¦..
INTERNET ပိုင်းမှာလဲ သာမန် Speed ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ်â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
အဲ့ဒီလိုမြန်စေဘို့အတွက် Proxy Server ရဲ့အတွင်းမှာ Cache ဆိုတဲ့ [Store] လုပ်နိုင်တဲ့..
ဂိုထောင်တစ်ခု ထားရှိထားပါတယ်â€¦အဲဒီဂိုထောင်ထဲမှာ..မိမိ Request လုပ်လိုက်တဲ့â€¦â€¦
အကြောင်းအရာကို ရှေ့မှကြိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ နေရာဒေသကနေပြီး ဆွဲယူထားပေးခြင်း.
ဖြင့် Internet Connection ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေပါတယ် .။ ( ချွင်းချက်။ ။ အရာရာ တိုင်းမှာ တော့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ဆိုတာတော့ ရှိကြစမြဲပါ။ ။ )
ကဲâ€¦â€¦â€¦.Proxy Server တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Squid ကိုဘယ်လိုအသုံးချရလဲâ€¦?
SQUID PROXY ကိုအသုံးချဖို့အတွက်ကိုတော့ ကျွန်တော် အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ ရှင်းပြမနေ
တော့ပါဘူးâ€¦..ကျွန်တော် နမူနာအဖြစ် ရှင်းပြပေးသွားမှာကတော့..ကျွန်တော်လက်ရှိသုံး..
နေတဲ့ SQUID 2.6.STABLE16 ကို နမူနာထားပြီးရှင်းပြသွားပါ့မယ်â€¦..
SQUID Configuration ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့SQUID 2.6.STABLE16 မှာလိုင်းပေါင်း ၄၅၈၀ ကျော်ရှိပါတယ်â€¦â€¦â€¦ကျွန်တော်ကတော့ Normal သုံးအနေအထားလောက်ပဲâ€¦..
SQUID Proxy Server ကို Linux OS ပေါ်မှာ အများဆုံး အသုံးပြုကြပါတယ်â€¦â€¦â€¦.
ကျွန်တော်ကတော့ Microsoft OS ပေါ်မှာ အသုံးပြုလို့ရဖို့တင်ပြသွားပေးပါ့မယ်â€¦â€¦.
SQUID Configure ပိုင်းကတော့ အားလုံးအတူတူပါပဲâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
Microsoft OS ပေါ်မှာ အသုံးပြုဘို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Software တွေကတော့â€¦â€¦
ကျွန်တော် အပေါ်ပိုင်းမှာ ရှင်းပြထားခဲ့ပြီးပါပြီ.............................................
SQUID-STABLE-DELAYP ဆိုတာလဲရှိသေးတယ် သူကတော့ MSYS +MinGW Software အသုံးပြုစရာတောင်မလိုပါဘူးâ€¦ကျွန်တော်ကတော့
သိပ်မကြိုက်ဘူးဗျာâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..ကိုယ်တိုင် Configure လုပ်ရတာကိုပဲ
ပိုကြိုက်တယ်â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.ဒါကြောင့် DELAYP အကြောင်းကို..
ဒါလေးကတော့ Online Manual က Copy လေးပါâ€¦Download လုပ်လို့ရအောင်လို့ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦
 1. Installing Microsoft visual C++ 6.0 SP6
Inno Setup Compiler (or) Python
 2. Installing MinGW
â€¢	A free open source GCC compiler for Windows that allow one to produce native Windows programs that do not rely on any 3rd-party C runtime DLLs
â€¢	Download MinGW Setup (MinGW-4.1.0.exe or MingGW-5.0.2.exe) from http://mingw.org
â€¢	Install MinGW (the installer will automatically download the required packages)
â€¢	. Installing MSYS
â€¢	A Minimal SYStem to provide POSIX/Bourne configure scripts the ability to execute and createaMakefile used by make
â€¢	Download MSYS-Setup (MSYS-1.0.10.exe) from http://mingw.org
â€¢	Install MSYS and follow the instructions. When the installers asks forainstall location, select
â€¢	C:\_MSYS instead of the default C:\_MSYS\_1.0
â€¢	MSYS နဲ့ MinGW Install လုပ်ပြီးချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် Edit လုပ်ပေးရပါတယ်
â€¢	After the installation you should haveashortcut to MSYS on your desktop.
â€¢	Right-click on this MSYS shortcut and select edit. Now Notepad opens, add the following statement
â€¢	at the top of the file after the comment lines (rem):
â€¢	save the file and close Notepad.
â€¢4. Installing Squid 2.6 STABLE 16
Squid ကို Install လုပ်ဘို့အတွက်ကတော့ အရင်ဆုံး Compression File ဖြစ်တဲ့
Tar.gz ကိုအရင်ဖြန့်ချဘို့လိုပါလိမ့်မယ်â€¦.ဒါကြောင့် Install လုပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ MSYS
Program ကို Run ပြီး Configure လုပ်ကြရအောင် â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Command နဲနဲတော့သုံးရလိမ့်မယ် Command Line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်â€¦
အကျယ်တ၀င့် မရှင်းပြတော့ပါဘူးâ€¦လက်ရှိအသုံးပြုရမယ့် Command ကိုသာ အဓိက
ထားပြီးရှင်းသွားပါ့မယ်â€¦Coomand Line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နားလည်ထားတဲ့ သူ
( မှတ်ချက်။ ။ အလွန်အရေးပါလှတဲ့ Command Line အပိုင်းကိုတော့ လူတိုင်းလေ့လာ
ထားသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်â€¦.ကျွန်တော်လဲ လေ့လာဆဲ လူတစ်ယောက်ပါပဲ).........................................................................
ကျန်ရှိသေးတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ကျွန်တော် နောက်တစ်ချိန်မှာ ဆက်လက်ရေးသား......
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Squid Compression file ဖြစ်တဲ့
Squid-2.6.STABLE16.Tar.gz ရှိတဲ့ Location ကိုရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်သွားပါâ€¦...
ပြီးရင်တော့ Compress file ကို ဖြန့်ချရန် အောက်ပါ Command ကိုအသုံးပြုပြီး ဖြန့်ချပါâ€¦
Tar â€“xvzf squid-2.6.STABLE16.tar.gz ပြီးရင်တော့ Keyboard မှ Enter ပါâ€¦â€¦.
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း ဖြန့်ချပြီးနောက် ls ဖြင့်မိမိ ဖြန့်ချလိုက်တဲ့ Folder ကိုကြည့်ပါ.
ပြီးရင်တော့ Squid-2.6.STABLE16 Folder ထဲကိုဝင်ဘို့ အောက်ပါ Command ကိုသုံးပြီးဝင်ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Cd squid-2.6.STABLE16 ပြီးရင်တော့ Keyboard မှ Enter ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
Squid-2.6.STABLE16 Folder အောက်ကိုရောက်သွားရင်တော့ Configure လုပ်ဘို့.
အတွက် အောက်ပါ Command ကို အသုံးပြုပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
./configure --prefix=c:/squid --disable-wccp --disable-wccpv2 \_
Configure လုပ်ချိန်ပြီးအောင် ခဏစောင့်ပေးပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
ပြီးသွားရင်တော့ make Command ထက်ရိုက်ပါ ပြီးသွားရင်တော့.......make install Command ဖြင့် Squid Folder ကို တည်ဆောက်ပါမယ်။
ls Command ဖြင့် မိမိ Configue လုပ်လိုက်တဲ့ Squid
ဆိုတဲ့ Folder ရှိမရှိ ကြည့်ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Squid Folder ကိုတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့â€¦â€¦â€¦â€¦
MSYS Command Prompt မှ Exit နဲ့ထွက်လိုက်ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
ပြီးရင်တော့ Inno Setup Compiler (or) Python , C++ တို့ကိုသုံးပြီး squid.conf File ကိုEdit လုပ်ဘို့အတွက် C:\_squid\_etc အောက်မှာရှိတဲ့ squid.conf ကိုဖွင့်ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
MSYS Command Prompt မှလည်း squid.conf File ကို Edit လုပ်လို့ရပါတယ်.
MSYS Command Prompt မှနေပြီး Edit လုပ်တဲ့နေရာမှာ Tird party Software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Configure လုပ်ရတာနဲနဲရှုပ်တာရယ် Command သုံးပြီး Edit လုပ်
ရတဲ့အတွက် မှားသွားရင် Edit လုပ်ခြင်းကို အစကနေပြန်စနေရပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်.. ကျွန်တော် Inno Setup Compiler နဲ့ပဲ ရှင်းပြသွားတော့မယ်â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
(မှတ်ချက်။ ။ squid.conf ဖိုင်လေးကို Edit မပြုလုပ်မီ Backup အရင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်
Edit လုပ်ဖို့အတွက် squid.conf ကိုဖွင့်ပြီးရင်တော့ အောက်ပါ Step အတိုင်းအသေအချာ
ဆောင်ရွက်ပေးပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.ရှာဖွေရလွယ်ကူအောင်လို့ အနီးစပ်ဆုံး Line နံပါတ်
လေးတွေကိုပါ ထည့်ရေးပေးထားပါတယ် အဓိက ကတော့ TAG: ခေါင်းစဉ်ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦..
Step 1. TAG: http_port
http_port 9090 Line No.942
http_port နေရာမှာကတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Port ရိုက်သွင်းပြီးတော့
Step 2. TAG: cache_peer
cache_peer ygncache3.mpt.net.mm parent 80800no-query
Cache_peer with your ISP Proxy Domin name and port etc. Line No.1504
Cache_peer မှာကတော့ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ [ISP] ခေါ် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုပေး
တဲ့ Domin name (သို) IP နဲ့ Port ကို ထည့်ပေးရပါမယ် ဥပမာ မြန်မာမှာဆိုရင် အင်တာနက် Services ပေးတဲ့နေရာ နှစ်ခုရှိပါတယ် MPT & BaganNet
cache_peer ygncache.mpt.net.mm parent 80800no-query
cache_peer ygncache4.mpt.net.mm parent 80800no-query
cache_peer cache-dial.bagan.net.mm parent 80800no-query
cache_peer cache-dsl.bagan.net.mm parent 80800no-query
cache_peer cache-wll.bagan.net.mm parent 80800no-query
BaganNet မှာဆိုရင်တော့ Port က နှစ်မျိုးရှိပါတယ် 8080 or 9090 ကြိုက်ရာအသုံးပြုလို့
Step 3. TAG: cache_mem	(bytes)
cache_mem 64 MB Line No.1648
Step 4. TAG: maximum_object_size	(bytes)
maximum_object_size 4096 KB Line No.1894
Step 5. TAG: cache_dir
cache_dir ufs c:/squid/var/cache 100 16 256 Line No.1855
Step 6. TAG: access_log
# To log the request via syslog specifyafilepath of "syslog"
access_log c:/squid/var/logs/access.log squid Line No.2015
Step 7. TAG: cache_log
cache_log c:/squid/var/logs/cache.log Line No.2031
Step 8. TAG: cache_store_log
cache_store_log c:/squid/var/logs/store.log Line No.2041
Step 9. TAG: emulate_httpd_log	on|off
emulate_httpd_log on Line No.2101
Step 10. TAG: dns_nameservers
dns_nameservers 203.81.64.19 203.81.64.20 Line No.4236
Using ISP DNS IP
Dns_namesevers မှာကတော့ မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ ISP ရဲ့ DNS IP ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ် ဥပမာ MPT ဆိုရင် 203.81.64.19 and 203.81.64.20
BaganNet ဆိုရင် 203.81.71.69 and 203.81.71.73 တို့ဖြစ်ပါတယ်â€¦â€¦â€¦.
Step 11. TAG: acl
Chacking for list etc Line No.573
[ACL] ACCESS CONTROLS LIST မှာ စစ်ဆေးပြီးလိုအပ်တာရေးထည့်ပေးပါ.
acl Safe_ports port 80 8080 909	# http
ပြီးရင် လိုင်းနံပါတ် 618 မှာအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပေးပါâ€¦â€¦
ပြီးလျှင် လိုင်းနံပါတ် 641မှာ အောက်ပါအတိုင်းဆက်လုပ်ပေးပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Step 12. TAG: visible_hostname
visible_hostname SquidNetwork Line No.3046
SquidNetwork နေရာမှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နာမည်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
Step 13. #	never_direct deny local-servers
never_direct allow all Line No.4107
Step 14. #	always_direct allow local-intranet
never_direct allow all Line No.4116
ပြီးသွားရင်တော့ squid.conf ကို Edit ပြုလုပ်တာ ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Save လုပ်
ပြီး Inno Setup Compiler ထဲမှ ထွက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ MSYS (သို့) Windows ရဲ့
Command Prompt မှနေ၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင် C:\_squid\_sbin ထဲကိုရောက်အောင်သွားပါ Command တွေကတော့ Cd \_
C:\_squid\_sbin>squid â€“D â€“z
C:\_squid\_sbin>squid â€“i ပါ ပြီးသွားရင်တော့ CMD Prompt မှ Exit နဲ့ထွက်လိုက်ပါâ€¦.
ပြီးရင် Start>Run ထဲမှ နေပြီး Services.msc (သို့) Control Panel > Administrative Tools > Services ထဲသို့ဝင်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါâ€¦.
ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း Squid ရဲ့ Properties ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Startup type မှာ Automatic ထားပေးပြီးတော့ Apply လုပ်ပါ ပြီးရင် Start လုပ်ပါ။
Connection Timeout Error ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Services ထဲက Squid ကို Restart
ဒါဆိုရင်တော့ Squid Proxy Server Installation ပိုင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ.
အင်တာနက် အသုံးညပြုဖို့အတွက် Web Browser များကို Settings ချိန်ပေးပါâ€¦.
Browser Settings ချိန်တာကိုတော့ ကျွန်တော်အထူးတလယ်ရှင်းပြနေစရာမလိုလေက်
တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ခဏ ခဏ ပြင်နေရလို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
မိမိ သုံးမည့်စက် မှာ INSTALL လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ Proxy Settings မှာ
127.0.0.1 Port မှာ 9090 မိမိ စက်ကို Server အဖြစ်အသုံးပြုပြီး အခြားစက်မှအသုံးပြု
မယ်ဆိုရင်တော့ Proxy Settings မှာ Squid Proxy Server Install လုပ်ထားတဲ့စက်ရဲ့
IP ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ် Port က တော့ 9090 ပါပဲâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..
ဒါဆိုရင်တော့ INTERNET သုံးဖို့ အရန်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ။(ချွင်ချက်။။ Port နံပါတ်ဟာ
ကျွန်တော်တို့ Squid.conf ထဲက လိုင်းနံပါတ် 942 မှာရိုက်ထည့်ခဲ့တဲ့ နံပါတ်ဖြစ်ရပါမယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Listen Port ဖြစ်နေလို့ပါ။)
ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး ဖတ်ချင်တယ်
Download Links Software တွေ Upload လုပ်ရန်အဆင်မပြေသေးပါသဖြင့် Guide လုပ်ထားတာလေးကိုပဲ အရင်ဆုံးလေ့လာပေးစေချင်ပါတယ်...........
Squid-2.6-STABLE16 ကိုတော့ အကိုကြီးရေခါး [yeakharr] ပေးထားတဲ့ Links လေးမှ ရယူလိုက်ပါ...............................
Last edited by sankhaingphyo; 16-03-2008 at 01:23 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ sankhaingphyo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မိုးထွန်း, always528, bonge, Chee buu lay, kbc, maungwanna, nayzaw3053, phoelapyaee, thura.it, Zin Ko
Visit sankhaingphyo's homepage!
Find More Posts by sankhaingphyo
22-02-2008, 07:08 PM
ပြန်စာ - Connection ကောင်းပြီး Upload Download လုပ်ခြင်သူများအ&#
သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါ ကိုစံခိုင်ဖြိုးရေ... ။ ခုလို တတ်သိသလောက် မျှဝေပေးတာ အလွန်အင်မတန်မှ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပညာဒါန မျိုးစေ့ ဆက်ပါဦး။ သိပ်မတတ်ဘူးလို့ စကားခံထားပေမယ့် အရေးအသားကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပညာရှင် တစ်ယောက်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေလည်း စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စောင့်ပြီးလေ့လာသွားပါမယ် အခုလိုမျှဝေပေးတာ အရန်းကောင်းပါတယ် အချိန်ရရင် ဆက်လက်ရေးသားပေးပါနော် ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ညီထွဋ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
22-02-2008, 07:49 PM
22-02-2008, 07:55 PM
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 42 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားနေပါပြီ sankhaingphyo ရေ..
[COLOR="Blue"]အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းဟာ အနမ်းနဲ့ တူတယ်...[/COLOR]:15:
[COLOR="Cyan"](--------------( :6: )-------------- )[/COLOR]
[COLOR="Blue"]ကျွန်တော့်ရဲ့ [/COLOR][URL="http://www.namelesscreator.co.cc"] [B][COLOR="Red"]ကမ္ဘာ[/COLOR][/B] [/URL] [COLOR="blue"]ကို လာလည်လို့ ရပါတယ်...[/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ lynnthant အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit lynnthant's homepage!
Find More Posts by lynnthant
22-02-2008, 08:25 PM
[COLOR="Blue"]လောကမှာ အရေးကြီးတာက အရေးမကြီးတာတွေကို အရေးတကြီး မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်။[/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မင်းထက်ဇဏ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
22-02-2008, 11:37 PM
23-02-2008, 11:04 PM
ပြန်စာ - လက်တွေ့လေ့လာ... Squid Proxy Server
အားလုံးသော မိသားစုများ၊ ယောင်းယင်းများ မှ ကျန်တော့်ကို နွေးထွေးပျုငှာစွာ ကြိုဆိုကြတဲ့အတွက် ကျန်တော် ၀မ်းသာလို့ မဆုံးပါဘူး......... ကျန်တော်ဒီနေရာလေးကနေပြီး အားလုံးသော မိသားစုဝင် များနှင့် လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း ယောင်းယင်းများကို ဂါရ၀ ပြုလိုက်ရပါတယ်ဗျာ..................................
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ sankhaingphyo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
24-02-2008, 01:55 AM
ကျွန်တော်တွေ့တာတစ်ခုရိုတယ်ဗျ ။windows setup ပါ။install and then တန်း use ရုံပဲ၊ version ကတော. နိမ့်နေသေးတယ်။ try လို့ရအောင်လို့ပါ ကိုယ်ပိုင်လုပ်နည်းသိရတော့ပိုကေင်းတာပေါ့။မလုပ်ချင်သူတွေအတွက် သုံးချင်ရင်ဒီလင့်မှာ
setup_squid_2_5_stable_3_eng.exe ကြည့်ပါ။လုပ်နည်းပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကို sankhaingphyo ရဲ့ post ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
original website -> http://www.bofi.camelot.de/squid.htm
Latest Squid Release page http://www.squid-cache.org/Versions/v2/2.6/
Last edited by yeakharr; 24-02-2008 at 01:59 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ yeakharr အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဖယောင်း, လူမုန်း, phoelapyaee
24-02-2008, 02:13 AM
ကျေးဇူးပါ အကို yeakharr ရေနောက်များမှာလဲ အသိအမြင်တွေ တိုးပွားရအောင်လို့ ကူညီပြီး လက်တွဲခေါ်ပါဦးနော်.....
ှကျွန်တော် ဟိုအရင်အပတ်က SQUID Proxy Server နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှင်းပြခဲ့တာ...
အသုံးပြုရမယ့် Software များနဲ့ပတ်သက်လို့...ရှင်းပြရုံလေးရှင်းပြခဲ့တာဆိုတော့............သိပ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလဲ.......ဒီစိတ်ပုပ်လှတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ရယ်ကြောင့်.....Files တွေ Upload လုပ်ဖို့ခက်နေလို့ပါ......................................................................
အခုတော့...ဖိုင်တွေအားလုံး..စုစည်းထားပြီးပါပြီ...............................အောက်ပါ Links လေးမှာ.....လိုအပ်တဲ့ Software များ ဖြစ်တဲ့ Microsoft Visual Studio C++ 6.0 & SP6
MSYS + MinGW
SQUID 2.6 STABLE 16 များကို..............................................
တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး စေတနာ အရင်းခံထားပြီး......လိုအပ်သည်များကို လည်း ကူညီဖြည့်စည်း ပေးကြပါလို....ကျွန်တော်...ဒီနေရာလေးကနေပြီး...မြန်မာမိသားစုဝင်....အပေါင်းအသင်း..ရောင်းယင်း.
မိတ်ဆွေများကို....မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ်.........................................အစဉ်လေးစားလျက်..................ဒေါင်းလော့လုပ်မည့် Links လေးပါ... Download Click
ူLogin ID =workman
Password = myanmarfamily.org
လမ်းလျှောက်တက်စ ကလေးငယ်ကို လက်တွဲခေါ်ပါâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.
ဘယ်အချိန်သေမယ်မသိတဲ့ဘ၀မှာ သေမယ့်ရက်ကို တစ်နေ၀င် တစ်နေထွက် ထမင်းစားရင်းထိုင်စောင့်ခြင်းထက် အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့သေရခြင်းက ပိုပြီး မွန်မြတ်၏။
Last edited by sankhaingphyo; 02-03-2008 at 03:13 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ sankhaingphyo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Chee buu lay
ပို့စ် 37 ခုအတွက် 89 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
squid ကို စမ်းနတာ ကြာပါပြီ... windows ,linux ၂ မျိုးလုံးနဲ့စမ်းသုံးဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် သိချင်တာ တခုရှိတယ်။ squid မှာ isp2ခု ကို တပြိုင်နှက်တည်း configuration လုပ်လို့ရလား။ ဆိုလိုတာက isp2ခုကို စက်တလုံးထဲမှာ သုံးမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီ isp2ခုကို network load balancing လုပ်ချင်တယ်။ delay pool အကြောင်းလေး လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ရှင်းပြပေးပအုံး။
Find More Posts by symbolbeta
windows အတွက် squid ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်း လုပ်လုပ်လို့ ရတယ်။ binary အနေနဲ့ပေါ့။ squid 2.6 stable18 အထိကို ရှိပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ symbolbeta အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ Professional တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး....ဒါပေမဲ့...ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်လေးကို..တင်ပြပေးသွားမှာပါ.
Originally Posted by symbolbeta
26-04-2008, 11:03 AM
ပို့စ် 128 ခုအတွက် 312 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
squid service မပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ............service ထဲမှာ ရှာကြည့်တာမတွေ့လို့ပါ....ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာလမ်းညွန်ပေးပါအုန်း........
Visit Zeiya's homepage!
Find More Posts by Zeiya
25-05-2008, 09:53 AM
26-05-2008, 07:40 PM
Originally Posted by Zeiya
ယောင်းရင်းကြီး Zeiya ရေ အဲ့ဒါကတော့ Install လုပ်ထားတာ Active မဖြစ်သေးလို့ပါ...
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြီး ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ.......အစဉ်ပြေမှာပါ..................
သတိထားရမှာ လေးကတော့ Squid ဆိုတဲ့ Folder လေး < C: > ရဲ့အောက်မှာ ရှိဖို့လိုပါမယ်............ပြီးတော့ Configuration အပိုင်းပြီးသွားမှသာ Install ပြုလုပ်ပါ....
Services ထဲမှာ Squid ဆိုတဲ့ Services ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်.........................
လမ်းလျှောက်တက်စ ကလေးငယ်ကို လက်တွဲခေါ်ပါ
18-06-2008, 03:39 PM
မြန်မာမိသားစု ဖိုလ်ရမ်လေးကို ၀င်ရောက်လည်ပတ်ကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို..
ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးကပဲ ဂါရ၀ ပြုပါရစေ........................................
Internet Connections ကို Direct Connection ယူထားသူများ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး..
Direct Connectioins Users များအတွက်ကတော့.........................Squid.conf..
ဖိုင်ရဲ့ Configure TAG: cache_peer Settings မှာ ဘာမှထည့်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး
နောက်ပြီး.......Configure items TAG:ACL ရဲ့အောက်နားက Configure items TAG: never_direct Opteions မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တာလေးရှိပါတယ်..
never_direct allow all ဆိုတဲ့ items လေးတွေပါပဲ...အဲ့ဒါလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့
ပြန်ပိတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်.......................ပြန်ပိတ်ဖို့ကတော့ လွယ်ပါတယ်............
အဲ့ဒိ စာကြောင်းလေးတွေရဲ့ ရှေ့ဆုံးထိပ်နားလေးမှာ < # > ဟောဒိလို ရှက်ဆိုင်းလေး
အဲ့ဒါဆိုရင် Squid Proxy Server ကို Direct Connection မှာ သုံးလို့ရသွားပါပြီ....
22-06-2008, 05:37 PM
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 38 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် Internet Cafe ကကြည့်ရတာဆိုတော့ အဲဒီ့ Post တွေကို eBook လေးလုပ်ပြီးတင်ပေးပါလားဗျာ...
Network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာ လိုလေးလည်းတင်ပေးနိုင်ရင်တင်ပေးပါ...
Last edited by tu tu; 22-06-2008 at 07:45 PM.. Reason: Quote လုပ်ထားလို့
Find More Posts by zawnaingxxx
22-06-2008, 05:52 PM
ကိုzawnaingxxx ရေ ကျနော် E book လုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဟိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
22-06-2008, 08:42 PM
isp2ခုကို တပြိုင်နှက်တည်း သုံးတာကို ကျွန်တော် အရင်ကမေးဖူးပါတယ်။ ဒီတလောအတွင်းမှာ ကျွန်တော် အဲဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး တော်တော်လေးကို လေ့လာဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ squid proxy မှာ အင်တာနက် ၂ လိုင်းကို ပေါင်းလို့မရဘူးလာဆိုတော့ ပေါင်းလို့ရပါတယ်။ round robin ပေါ့။ ဒါပေမယ် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အချက်တွေနဲ့တော့ မကိုက်ဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်အတွက် proxy တွေကလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဒုက္ခပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်လေဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲကျွန်တော်လိုချင်တာက ဒီလို .. ဥပမာဗျာ ပထမ အင်တာနက်လိုင်းက bandwidth 512 ရှိတယ် ဆိုပါတော့ ။ upload ,download2ခုလုံးကိုဆိုလိုတာပါ။ နောက် ဒုတိယ အင်တာနက်လိုင်းက လည်း 512 ပဲ။ အဲဒါကို ပေါင်းချင်တာ ။ ဒါဆို သာမန်တွေးကြည့်ရင်တော့ upload,download 1 M ဖြစ်မသွားဘူလား။ တကယ်တော့ မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျ။ အဲဒီလိုဖြစ်ချင်ရင်တော့ တကယ့်ကို really proxy server ၂ လုံးထိုင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ Network Load Balancing(NLB) ပေါ့။ ကျွန်တော် MS ISA server 2006 မှာ စမ်းလုပ်ကြည့်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် NLB ကလည်း integrated နဲ့ non integrated ဆိုပြီး နည်းလမ်း၂ ခုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။ non integrated က windows 2003 က ပေးတဲ့ NLB ပေါ။ integrated နည်းလမ်းကတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ISA ကပါ အဲဒီအလုပ်တွေကို တွဲလုပ်ပေးလို့ပါ။ windows 2003 server2လုံးပေါ်မှာ စမ်းကြည့်တာ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ inbound ,outbound2ခုလုံးကို NLB လုပ်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိရင် ကျွန်တော် အသေးစိတ် ပြောပြပေးပါမယ်။
ကျွန်တော် squid ပေါ်မှာပါ အဲဒီလိုလုပ်ချင်သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုထိတော့ စမ်းသပ်နေတုန်းပဲ။ သိတဲ့လူရှိရင် ပြောပြကြပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ symbolbeta အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
23-06-2008, 04:54 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုတာတေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
squid နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်းခင်ဗျာ......စိတ်ဝင်စားလို့ပါ.......
Originally Posted by sankhaingphyo
အကိုရေ .. ဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျာ ... တစ်ခြားလင့်ကနေ ပြန်ရှယ်ပေးပါလားဗျာ .. အားတော့နာပါတယ် .. ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေလို့ ပါ
15-09-2008, 08:54 PM
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 25 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
windows 2003 server 1 လုံးတည်းပေါ်မှာလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးလား ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားပါတယ် အသေးစိတ် ပြေပြပေးပါခင်ဗျား ကျွန်တော့်အီးမေးကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်၊ maungwanna@gmail.com ကျေးဇူးပြူပြီး ပြန်စာပို့ပေးပါခင်ဗျား စိတ်ဝင်တစားစောင့်နေပါတယ်
Find More Posts by maungwanna
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jul 2010
အခုလိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Linux မှာsystem restore point လုပ်လို့ရပါသလား ရရင်မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ် ပြီးတော့ linux ကို ghost (or ) clone ရိုက်လို့ရပါသလားခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyawthuaung430 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kyawthuaung430
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Apr 2011
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 33 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် squid proxy ကိုကောင်းကောင်း configure လုပ်ချင်လို့ပါ... internet/netgame ကို အိမ်မှာဖွင့်ပြီး.. wireless ကို အဓိကထား ဦးစားပေးပြီး.. လွှင့်ချင်တာပါ.. အဲ့လို wireless လွှင့်ရာမှာ ကျွန်တော်က wireless ကို ကြိုးဖုန်းနဲ့အသုံးပြုရတဲ့ access card ပုံစံမျိုး.. နာရီနဲ့ပဲ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့မြို့မှာလဲ.. အဲလိုလွှင့်တဲ့လိုင်းတစ်လိုင်းရှိပါတယ်.. သူက proxy server ထိုင်ပြီး.. သူ့လိုင်းကိုသုံးချင်ရင်.. သူ့ကဒ်ကိုဝယ်ရပါတယ်.. သူ့ကဒ်ကို ခဲခြစ်ပြီးတော့မှ ပါတဲ့.. code လေးတွေကို browser မှာ ထည့်ရတယ်လို့တော့ပြောဖူးပါတယ်... သုံးတော့သုံးမကြည့်ရသေးပါဘူး.. အဲဒီလိုဆင်ချင်ပါတယ်... wireless configure အပိုင်းကိုတော့ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. proxy server ကိုကောင်းကောင်း configure မလုပ်တတ်လို့ပါ.. ဘယ်လိုconfigure လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးကြပါဦးခင်ဗျာ.... တတ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော်တို့လိုလူပိန်းလေးတွေနားလည်အောင်ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ...
note; ကျွန်တော် squid proxy ရဲ့ topic တွေအောက်မှာလည်း.. မေးထားပါတယ်..ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေရင်လည်း ပြောပြသင်ပြပေးသွားစေလိုပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဖိုးလမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဖိုးလမင်း
proxy server, software howto
Slow Connection ကို ဖြေရှင်း မည့် Protable CC Proxy v6.4.0 FULL sankhaingphyo Software များဆိုင်ရာ 33 19-01-2012 10:10 AM
ကျော်ခွမယ့်ဆိုက်များ chit loon thu Websites များနှင့်ပတ်သက်၍ 63 20-12-2011 01:39 AM
Ultrasurf PyaitSone Applications710-02-2009 08:10 PM
Paragon Drive Backup Enterprise Server 8.51.1681 walonelay.walonelay Applications015-04-2008 06:24 AM